Dataset များ (1050)
ကမ္ဘောဒီးယား (545) မြန်မာ (389) ဗီယက်နမ် (274) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (201) ထိုင််း (195) တရုတ် (104) မလေးရှား (24) ဖိလစ်ပိုင် (24) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (23) အင်ဒိုနီးရှား (23) စင်္ကာပူ (23) Global (22) တီမော လက်စ်တေ (17) အိနိ္ဒယ (15) ဂျပန် (15) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (15) မွန်ဂိုးလီးယား (15) ဟောင်ကောင် (14) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (14) သီရိလင်္ကာ (14) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (12) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (12) မဲခေါင် (6) ဘင်္ဂလားဒေရှ် (4) ဘူတန် (4) နီပေါ (4) အာဖဂန်နစ္စတန် (3) ဩစတေးလျ (3) ကွတ်ကျွန်း (3) မိုက်ခရိုးနီးရှား ဖ... (3) အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ... (3) ကီဂျစ်စတန် (3) ကီရီဘာတီ (3) ကာဇက်စ်တန် (3) မာရှယ်ကျွန်း (3) မေ်ာလ်ဒိဗိ (3) နယူးဇီလန် (3) ပါကစ္စတန် (3) ပလော (3) တာဂျစ်စတန် (3) တာဂမန်နစ်စတန် (3) ထွန်းဂ (3) အူဘက်ကစ်စတန် (3) ဆာမိုအာ (3) အမေရိကန်နိုင်ငံ ဆာမ... (2) ဂူအန် (2) ဟာဒ်ကျွန်းနှင့် အမ်... (2) မကာအို (2) မြောက်မာရီယားနား (2) နော်ဖော့ခ် ကျွန်း (2)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (760) ဗမာဘာသာစကား (155) ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား (80) ခမာဘာသာစကား (77) ထိုင်း (19) လာအို (14)
WMS (565) CSV (425) DB_TABLE (201) XLSX (196) SHP (183) JPEG (155) GeoJSON (148) TXT (126) KML (119) ZIP (86) XLS (50) HTML (42) PDF (42) SQLITE (24) GeoTIFF (17) sqlite (8) geotiff (6) JSON (6) TIFF (4) JPG (3) PNG (3) TSV (3) URL (3) DOCX (2) raster (2) XML (2) .pdf (1) ESRI Grid (1) Geopackage (1) GIF (1) IMG (1) KMZ (1) MDB (1) mp4 (1) ODS (1) ODT (1) QML (1) stata (1) SVG (1) WEB Base (1)
Open Development Me... (359) Open Development Ca... (249) The Asia Foundation (126) Open Development Vi... (112) Open Development My... (105) Open Development Laos (37) Open Development Th... (34) ADB (17) Research Center for... (9) Community Developme... (2)
ကူညီထောက်ပံ့မှုနှင့... (135) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (58) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (58) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (45) အခြေခံအဆောက်အဦများ (39) မြေယာ (38) ရေအရင်းအမြစ်များ (31) စိုက်ပျိုးရေး (29) ရွေးကောက်ပွဲများ (29) လူဦးရေ (28) ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု (27) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (27) အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်... (27) ကပ်ရောဂါ (27) သစ်တောမြေဧရိယာ ဖုံး... (24) အစိုးရ (24) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှ... (24) ပညာသင်ကြားနိုင်မှု (23) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ... (23) သစ်တောများ နှင့် သစ... (23) လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတ... (23) အုပ်ချုပ်ရေး (22) စွမ်းအင် (22) စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်... (22) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိ... (21) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုင... (20) တိုင်းရင်းသားလူနည်း... (20) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်... (19) မြေယာအမျိုးအစားများ (19) လမ်း၊ တံတားများ (19) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (19) သစ်တောအမျိုးအစားများ (17) ဇီဝမျိုးကွဲများ (16) ကုန်သွယ်ရေး (16) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (15) မူလတန်းနှင့် အလယ်တန... (15) အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ (15) ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာ... (14) ပညာရေး နှင့် လေ့ကျင... (14) SDG 15 Life on land (14) Sustainable develop... (14) သတင်းအချက်အလက်များ ... (13) မြေအောက်သယံဇာတ ထုတ်... (13) SDG6Clean water a... (13) ရေလွှမ်းမိုးမှုများ (12) ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ (12) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ (11) စီးပွါးရေးနှင့် ကုန... (11) ဆေးရုံနှင့် ဆေးခန်း... (11) သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အ... (10)
unspecified (216) Creative Commons At... (137) CC-BY-4.0 (131) Creative Commons At... (101) CC-BY-SA-4.0 (89) License not specified (70) CC-BY-3.0-IGO (18) Other (Open) (15) Other (Attribution) (5) CC-BY-ND-4.0 (4) CC-BY-NC-4.0 (3) CC0-1.0 (2) ODC-PDDL-1.0 (2) Open Data Commons O... (2) CC-BY-SA-3.0-IGO (1) Creative Commons CC... (1) Creative Commons No... (1) ODbL-1.0 (1) ODC-BY-1.0 (1) Open Data Commons A... (1) Other (Public Domain) (1)
1,050 datasets found
ကမ္ဘောဒီးယား 2021၊ 22 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Royal Gazettes of Cambodia ပြည်သူပိုင်မြေ, မြေယာအမျိုးအစားများ, အစိုးရပိုင်မြေ
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 14 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Royal gazette: sub-decree and decisions (2006-2020). Council for... အထူးစီးပွါးရေးဇုန်များ
This dataset describes the information of special economic zone (SEZ) in Cambodia from 2006 to 2020. The total number of 46 SEZs are recorded in point that data was collected...
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊6နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: Prakas No.628 on 26.12. 2011 Prakas No.123 on14.03.2011 Prakas... စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
The dataset provides information of fish sanctuary, community fishery and flooded forest in Cambodia up to 2019. Geographic data is encoded in the WGS 84 zone 48 coordinate...
ကမ္ဘောဒီးယား 2019၊ 20 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: World Bank Publication: Project appraisal document onaproposed... လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
This dataset shows information about the land concession implemented by The Land Allocation for Social and Economic Development (LASED) Phase2which covers the LASED phase 1...
ဗီယက်နမ် 2021၊ 20 အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: https://ckns.mof.gov.vn/SitePages/home.aspx ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2021၊9စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry... ကြိုးဝိုင်းဧရိယာများ, သစ်တောမူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး, သစ်တောအမျိုးအစားများ
ကမ္ဘောဒီးယား 2021၊6စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: ကျေးလက်ရေထောက်ပံ့မှု, ကျေးလက်ရေရရှိမှုနှင့် မိလ္လာရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ, ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု, မြို့ပေါ်ရေထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖြန့်ဝေမှု, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ တိုးတက်စေရန်အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှု, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 2018၊ 29 မေ ရင်းမြစ်: The Environmental Impact Assessment (EIA) reports were shared by... စီးပွါးဖြစ် မြေယာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးခြင်း, သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာချက်
This spreadsheet is developed from gathering information from the various report of environmental impact assessment reports (EIA) and show information such as company profile,...
ကမ္ဘောဒီးယား 2021၊ 16 စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: ISAF M&E database: http://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း နှင့် အာဏာမျှဝေသုံးစွဲခြင်း, ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း, အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ
ကမ္ဘောဒီးယား 2021၊ 27 စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: Official website of National Institute of Statistics... လူဦးရေ, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း, သန်းခေါင်စာရင်းများ
ကမ္ဘောဒီးယား 2021၊ 27 စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: Official website of National Institute of Statistics... လူဦးရေ, သန်းခေါင်စာရင်းများ
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2021၊ 23 စက်တင်ဘာ ရင်းမြစ်: Lao DECIDE (http://www.decide.la) Poverty reduction, တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ, ပညာသင်ကြားနိုင်မှု, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု, လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ စာတတ်မြောက်မှု
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊3ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: National Committee of Sub-National Democratic Development (NCDD):... ဘတ်ဂျက်၊ ရသုံးငွေစာရင်း, အခြေခံအဆောက်အဦများ, အစိုးရ
This dataset shows the​ number of project, contract, total project cost estimated and total contract value of sub-national infrastructure in Cambodia from 2014-2019 which...
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2021၊ 23 ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: အဆင့်မြင့် ပညာရေး
အာရှ, ဗီယက်နမ် 2020၊ 10 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: https://ourworldindata.org/coronavirus ကပ်ရောဂါ
ဗီယက်နမ် 2021၊ 10 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: https://ncov.moh.gov.vn/ ကပ်ရောဂါ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 2021၊ 18 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: Source: World bank, Economic profile, Lao PDR, Doing business... မြေယာ
ဗီယက်နမ် 2021၊ 10 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu ကပ်ရောဂါ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ကမ္ဘောဒီးယား, မြန်မာ, ဗီယက်နမ် 2021၊ 1 ဇွန် ရင်းမြစ်: Various sources of legal documents in country. သတင်းအချက်အလက်များ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်မှု
မြန်မာ 2021၊ 23 ဇူလိုင် ရင်းမြစ်: ဝီကီပိဒိယ (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Myanmar) အဆင့်မြင့် ပညာရေး
ဤအချက်အလက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိအဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာန (၂၁၃) မှာ (ပညာရေးဌာန၊ ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်) ၏တည်နေရာကိုပြသည်။